Istaraatiijiyaddaada B2B waa inay ku jirtaa ganacsiga | Martech Zone
Ma ogtahay inaan ku darnay a dukaan adeegyada on Martech? Annagu kuma dhiirrigelinno tan (weli) maadaama aan sii wadno dabacsanaanta, laakiin waxaan aragnaa shirkado badan oo badan oo doonaya kaliya sicirka hore oo aan dooneynin inay si toos ah ula shaqeeyaan koox iib ah si ay u saxiixaan wax soo saar ama adeeg. Waa sababta aan u dhignay qaybtaan ka mid ah boggeena waxaanan sii wadaynaa inaan ku darno badeecado iyo adeegyo - laga bilaabo xisaabiyenimada si ay u sawiraan.
Maaddaama khibradaha wax iibsiga ee 'eCommerce' iyo omnichannel ay u kordhayaan xukunka B2C, waxay la mid noqon doonaan dukaamaysiga macaamiisha. Maaddaama iibsadayaasha iyo shaqaalaha wax soo iibsiga B2B ay yihiin macaamiisha noloshooda shakhsiga ah, rajada laga qabo macluumaad, si sahlan loo raaco dhufto ee wax ku iibsiga dhijitaalka ah waxay khuseysaa sida ugu badan iibsashada gawaarida cusub ee gawaarida shirkadaha sida ay u dalbato labo kabood oo cusub.
Waxaan saadaalinay ganacsi kasta wuxuu noqon lahaa ganacsi eCommerce… Laakiin anagu kaligeen ma nihin! Shirkadda 'Accenture Interactive' ayaa daraasad ku sameysay xirfadlayaal heer-sare ah oo dijitaal ah iyo eCommerce ah oo ka tirsan ururada waaweyn ee B2B si ay u fahmaan fikradda isbeddelka ee ku wajahan iibsashada qadka.
Tirada iibsadayaasha B2B ee wax ka iibsada khadka tooska ah waxay ka sarreeyaan 57% sanadkii 2013 ilaa 68% sanadka 2014.
86% ururada B2B hadda waxay bixiyaan ikhtiyaarrada wax iibsiga ee khadka tooska ah.
Kaliya 50% ururada B2B waxay ka helaan wax ka badan toban meelood meel dakhligooda iibka internetka.
Furaha midkan tan aan ku aragnay ayaa ah in booqdayaasha B2B aysan rabin inay horay ubixiyaan iyagoo isticmaalaya kaarka deynta shaqooyinkan faraha badan. Taasi maahan wax dhibaato ah hada waxaan bixinay istiraatiijiyado badan oo lacag bixin ah, oo ay kujirto qaansheegadka.
Tags: Accentureb2bganacsiga e2infographicomnichanneliibinta internetkaiibiso adeegyada khadka tooska ah